Ilay Litera Kely Indrindra Manome Toky Antsika: Yôda
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mongol Mooré Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
Ireo Litera Hebreo Efatra na ny anarana masin’Andriamanitra hoe Jehovah, vakina avy eo ankavanana miankavia
Afaka matoky ve isika fa ho tanteraka daholo izay nampanantenain’Andriamanitra? Tena nino an’izany i Jesosy, ary nampiany hatoky an’izany koa ny mpihaino azy. Diniho ny fanoharana nataony tao amin’ilay Toriteny teo An-tendrombohitra. Hoy izy ao amin’ny Matio 5:18: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho mora kokoa ny hahalevona ny lanitra sy ny tany, noho ny hahalevona ny litera kely indrindra na ny tendron-tsoratra iray ao amin’ny Lalàna, mandra-pahatanterak’izay rehetra voasoratra ao.”
Yôda (י) no litera kely indrindra amin’ny abidy hebreo. Izy io no voalohany amin’ireo Litera Hebreo Efatra na ny anarana masin’Andriamanitra hoe Jehovah. * Noheverin’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ho zava-dehibe ny teny sy ny litera tao amin’ny Lalàn’Andriamanitra, na dia ny “tendron-tsoratra iray” aza.
Nilaza i Jesosy fa ho mora kokoa ny hahalevona ny lanitra sy ny tany, noho ny hoe tsy ho tanteraka ny tsipiriany kely indrindra ao amin’ny Lalàna. Milaza anefa ny Baiboly fa haharitra mandrakizay ny lanitra sy ny tany ara-bakiteny. (Salamo 78:69) Te hilaza àry i Jesosy hoe ho tanteraka daholo na dia ny tsipiriany madinika indrindra ao amin’ny Lalàna aza.
Zava-dehibe amin’i Jehovah ve na dia ny tsipiriany madinika aza? Eny. Tsy navelany hisy hotapahina, ohatra, ny taolan’ny ondry nohanina tamin’ny Paska. (Eksodosy 12:46) Hoatran’ny hoe zavatra madinika izany. Angamba tsy azon’ny Israelita hoe nahoana izy ireo no tsy tokony hanapaka ny taolana rehetra ao amin’ilay ondry. Fantatr’i Jehovah anefa fa faminaniana momba an’izay hitranga amin’ny Mesia io tsipiriany io. Tsy hisy hotapahina koa mantsy ny taolany, rehefa hovonoina eo amin’ny hazo fijaliana izy.—Salamo 34:20; Jaona 19:31-33, 36.
Inona no ianarantsika avy amin’ny tenin’i Jesosy? Afaka matoky koa isika hoe ho tanteraka daholo izay nampanantenain’i Jehovah, na dia ny tsipiriany madinika indrindra aza. Manome toky antsika tokoa ilay litera kely indrindra amin’ny teny hebreo!
^ feh. 3 Iôta no litera kely indrindra amin’ny abidy grika. Mitovy amin’ilay litera hebreo hoe י (yôda) izy io. Azo inoana fa ilay litera hebreo no noresahin’i Jesosy, satria nosoratana sy nampitaina tamin’ny teny hebreo ny Lalàn’i Mosesy.
Jereo ilay fampanantenan’Andriamanitra hoe hampiasa ny Fanjakany mba hampiadana ny tany.
Jesosy Kristy: Ilay Mesia Nampanantenaina